China Backpack T-B3982 Famokarana sy ozinina | TIGERNU
TIGERNU ririnina andian-dehilahy rangotra kitapo
Fahafahana: Ity haben'ny kitapom-batsy ho an'ny lehilahy ity dia 30 * 15 * 43cm (L * W * H), mety hatramin'ny laptop 15.6 inch. Ny efitrano lehibe dia ampy ho an'ny bokinao, finday, kitapom-batsy, telefaona, banky herinaratra sns. Ny paosy roa dia tsara ho an'ny tavoahangin-drano sy elo. Ny paosy zipper roa eo anoloana sy ny paosy miady amin'ny halatra dia manome anao fidirana mora amin'ny entanao kely. Kitapo misy tanjona maro io ary afaka hitazona ny filanao rehetra milamina.
Kalitao: ny kitapom-batsy dia vita amin'ny splashproof & Oil proof & flame retardant oxford. Izy io dia matanjaka sy ara-tontolo iainana fitaovana, manohitra ny triatra ary maharitra kalitao. Ireo zipera sy kojakoja hafa dia namboarina avo lenta niaraka tamin'ny sary famantarana TIGERNU.
Endri-javatra: manamboara seranana USB sy ny tariby USB azo esorina manolotra anao fomba mety kokoa handoavana telefaona, takelaka sns .. Ny loaka an-telefaona dia manome fahalalahana anao hankafy ny mozika amin'ny fotoana rehetra. Ny fehin-kibo azo taratra dia mahatonga anao ho hita maso sy azo antoka kokoa amin'ny alina.
TIGERNU kitapom-batsy dia mety amin'ny toe-javatra rehetra sy olona rehetra.
Laharana maodely T-B3982
Loko: Mainty, volondavenona, manga
Habe: 28 * 17.5 * 43cm
Fampiasana: Fampiasana isan'andro
Endri-javatra: Tsy tantera-drano
Teo aloha: Kitapo mpitondra hafatra T-S8119
Manaraka: Kitapo kely T-L5188